China Mkpa igwe na-ejuputa mmanu igwe na ndị na-ebunye ya | Higee
Igwe a na-ejuputa ihe dị mma maka obere karama na nkedo, nke e mere na SUS304 igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ SUS316 mgbochi nchara nchara maka akụkụ nke kọntaktị na ihe onwunwe, nke a na-agbaso ụkpụrụ GMP.
Mkpa Mmanụ Na-ejuputa Nkọwa Labeling Machine Linear Line
1.Automatic Mkpa Mmanụ ndochi Machine akara
A na-etinye igwe a maka 15ml- 50ml mmanụ dị mkpa na-ekpuchi mkpuchi na ntinye aha na plastic ma ọ bụ karama iko.
Enwere ike ịhazi igwe ahụ iji mezue ya na tebụl nri nri, ọtụtụ isi ihe na-ehichapụ + sistemụ ọkụ (nkwụnye nri nri + nkwụnye + mkpuchi nri + mkpuchi), igwe nyocha na ịtụgharị onye nchịkọta tebụl.
A-is E nwere usoro ziri ezi dị elu iji nye ọkpụkpọ gụsịrị akwụkwọ iji chọta okpu na ， na-eme ka cam na-ebufe isi na-ebuli isi; nkwụsị nke torsion mgbe nile, ntinye mgbapụta na ntinye na njuputa; njikwa ihuenyo mmetụ, enweghị karama enweghị njuputa, ọ dịghị n'ime na okpu n'èzí, na-enwe uru nke nnyefe kwụsiri ike, ọnọdụ ziri ezi, dosing ziri ezi, ọrụ dị mma wdg.
A-● Akụrụngwa na-ewepụta mgbapụta pistin okpukpu anọ nke anọ iji mejupụta ya, wee ziga ya na ntinye ntụgharị site na eriri ebu, na mkpuchi ahụ na-agbagharị oge iji banye ọdụ mkpuchi iji kpuchie mkpuchi ahụ na-akpaghị aka; a na-eji mkpuchi okpukpu abụọ mee ihe maka akara na mkpuchi ya bụ eriri anọ. Ugboro abụọ na-agbada na nsọtụ ya na eri abụọ.
Usoro ndochi a dabara adaba maka obere karama na nkedo, nke emere na SUS304 igwe anaghị agba nchara na SUS316 mgbochi anaghị agba nchara maka akụkụ na kọntaktị na ihe onwunwe, nke agbadoro ọkọlọtọ GMP.
Nke gara aga: Mmanụ flling igwe akara
Osote: Mmanụ a Fụ na-ejuputa igwe
Igwe dị oke mkpa mmanụ